Burmese taste - Iora: အချိုပွဲပူတင်း-မက်ဆီကန်ဗားရှင်း (Flan) လုပ်ကြည့်ရအောင်
Posted by Iora at 12:27 AM
subuueain January 12, 2012 at 4:08 AM
သွားရည်ကျ သွားပါကြောင်း :D
Iora January 12, 2012 at 5:39 PM
ကုိုယ်နဲ့ သူ တပန်းကန်ထဲစားရင်ဇွန်းလုနေရတယ်..း)
မြတ်ကြည် January 12, 2012 at 4:29 AM
လုပ်ကြည့်ပြီး မမကို ပြန်ပြမယ် :)
Iora January 12, 2012 at 5:41 PM
rose January 12, 2012 at 4:56 AM
ပူတင်းလုပ်နည်းလေး အတွက် ကျေးဇူးပါ မမအိုင်အိုရာ။ နို့စိမ်း တစ်ဗူးက ဘယ်လောက် မီလီလီတာ(ml) လဲဟင် မမ။ ရို့စ်က နွားနို့ သို့မဟုတ် နို့ဆီနဲ့ လုပ်ချင်ရင် ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲ မှန်းကြည့်ချင်လို့ပါ။ တစ်ဆင့်ချင်းစီ သေချာပြထားတော့ လိုက်လုပ်ကြည့်လို့ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်း)။ မမက ဓာတ်ပုံရိုက်တာ တော်လိုက်တာ။ ပူတင်းပုံလေးတွေ ရိုက်ထားတာ ကြည်လင်ပြီး လှလိုက်တာ။ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ စာစောင်တွေမှာ ပါတဲ့ ပုံမျိုးလေးတွေ။ ရို့စ်ကိုလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနော် ဟိး)
Iora January 12, 2012 at 5:53 PM
အဲဒါမကြည့်ထားလိုက်မိဘူးကွယ်။ ပုံမှန်နုို့ ဆီဘူးအရွယ်ပါဘဲ။ နောက်တခါဝယ်ရင်မှတ်ထားလုိုက်မယ်နော်။
ရုို့ စ်ချီးမွမ်းတာနဲ့ ဒို့ တောင်မြောက်သွားပြီ။ ရုို့ စ်ကိုရုိုက်ပေးရင်လှမှာသေချာတယ် ရုို့ စ်ကလှပြီးသားမို့ လို့ လေ။း)
မီးမီးငယ် January 12, 2012 at 5:16 AM
Iora January 12, 2012 at 6:31 PM
ကိုယ်လည်းသိပ်ကျွမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ၀ါသနာပါလို့ လုပ်လုပ်ကြည့်ရာကနေ တချို့ ဟာတွေလုပ်တတ်သွားတာပါ။ မလုပ်တတ်တာကပိုများပါတယ်။း)
KhinU Khine January 12, 2012 at 5:59 AM
Iora January 12, 2012 at 6:32 PM
Hi..thanks for visiting too.
QuTe January 12, 2012 at 7:21 AM
နို့စိမ်းရှိတယ် သကြားရှိတယ် ကြက်ဥရှိတယ် အဲ့ အဲ့ အဲ့ အိုဗယ် အရှိဝူး ဂျာ အသင့်စားရန် ပါးစပ်လဲရှိတယ် မမအိုင်အိုရာ ပူတင်း နဲ့ ကင်းမ်ချီ လဲရှားမစား ဟင် :D :D
Iora January 12, 2012 at 6:35 PM
ဒါဆုို rice cooker နဲ့ ထဲ့ပြီးပေါင်းကြည့်ပါလား။ သိပ်ကွာမယ်မထင်ဘူး။
လုပ်လိုက်လေ..ကြာသလားလုို့ ။ မုန်လာဥ နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ် ကင်ချီနဲ့ လဲစားမယ်လေ..နော်.
Moe Moe January 12, 2012 at 8:09 AM
ကျေးဇူးပါ၊ ကျောင်းမှာ ပါတီလုပ်တော့ မက်ဆီကန်မတွေယူလာတာ စားလို့ ကောင်းလို့ သိချင်နေတာ....
အစ်မရေ Tamale လုပ်နည်းကောသိလားဟင် ???????
Iora January 12, 2012 at 6:50 PM
Tamale တော့မလုပ်ဖူးဘူးရယ်။ ဆုိုင်ကရယ်ဒီမိတ်တွေဝယ်စားရင်ဆုိုင်မှာစားရသလိုမကောင်းဘူးနော်။ ဟုိုတလောကတီဗီမှာကြည့်လိုက်ရတာတော့လုပ်ရတာတော့ငါးပေါင်းထုတ်တုို့ ဘာတို့ လိုလက်ဝင်တဲ့ပုံဘဲ။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်တွေလျှောက်ထဲ့ပြီးလုပ်ကြည့်မလားလို့ ။ (ပျက်မှာတော့သေချာတယ်။း)
Iora January 12, 2012 at 6:51 PM
Voila tres jolie flan.hmmm......Very delicious too.I just copied and pasted Makyarnyo's words from cbox:P
Iora January 12, 2012 at 6:58 PM
Thanks for the kind words. Because you came and checked I tried to post this quickly so that you won't be disappointed again. :D
ညယံ January 12, 2012 at 5:10 PM
လုပ်ကြည့်ရင် မခက်လောက်ဘူးထင်တယ် .. စမ်းကြည့်အုန်းမယ်နော် ..
ပုံထဲကလို လှလှလေးရရင် နောက်တခေါက်လာပြန်ကြွားမယ်နော် .. :)
Iora January 12, 2012 at 7:01 PM
မခက်ဘူးသိလား။ တကယ်မခက်ဘူး။ ပန်းကန်ထဲကိုမှောက်ထဲ့တာတခုဘဲပုံမလှမှာပူစရာရှိတယ်။ မှောက်မထဲ့ဘဲလုပ်တဲ့ပန်းကန်နဲ့ ဒါရုိုက်စားလည်းရတာပါဘဲ။ အရသာကတော့ကောင်းပြီးသားဘဲလေ။
ကောင်းမွန်ဝင်း January 12, 2012 at 7:51 PM
Iora January 12, 2012 at 10:53 PM
ပြောမယ်ဆုိုရင်ကိုယ်ကတော့ကြက်ဥပေါင်း ရယ် ပူတင်း ရယ် မြန်မာလိုဆုိုရင် တူတူဘဲလို့ ထင်တာ။ ဘာကွဲလည်းကိုယ်လည်းမသိဘူးရယ်။
ဒါကမြန်မာပူတင်းလုပ်တာနဲ့ ကွဲတာက သကြားလှော်ပြီးထဲ့၊
ခွက်ပြောင်းပြန်ပြန်မှောက်ထဲ့ပြီး စားတာဘဲကွာတာရှိတာပါနော်။ ဟုတ်ဘူးလား။
မုန့် ပိုချောပြီးပြောင်တယ်။ အရသာတော့တူတူလောက်ပါဘဲ။
jasmine(တောင်ကြီး) January 13, 2012 at 6:32 AM
အရမ်းကိုကြိုက်တယ် အားတဲ့အခါလုပ်ပြီးစာကြည့်မယ် နွားနို့နဲ့တော့လုပ်ဖူးတယ်
Vista January 13, 2012 at 6:24 PM
Iora January 13, 2012 at 9:14 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) January 14, 2012 at 12:02 AM
ကြည့်ရတာ ကိုယ်တိုင်လုပ်စားလို့ ရလောက်တယ်
ပူတင်းလေးက စားချင်စရာထက် ချစ်စရာပိုကောင်းတယ်.. ဟေးဟေး
နွားနို့ နဲ့ လုပ်ကြည့်ဖူးတယ်။ မအောင်မြင်လို့ လက်လျော့ထားတာ အခု စမ်းကြည့်မှဘဲ ကျေးဇူးဘဲနော်
san htun January 14, 2012 at 3:10 PM
Soe Yu Naing August 4, 2016 at 1:26 PM